radio himilo | Radio Himilo | Page 5
Home / Author Archives: radio himilo (page 5)
Burnley oo xaqiijisay in ay lasoo wareegtay Georges-Kevin Nkoudou.
radio himilo January 9, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 39 Views
Muqdisho – Burnley ayaa xaqiijisay in ay si amah ah kala soo saxiixatay Tottenham Hotspur ciyaaryahanka Georges-Kevin Nkoudou. 22 jirkaan ayaa ka soo wareegay Wembley isagoo usoo guuray Turf Moor, halkaas oo uu sii ahaan doono illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. ...
radio himilo January 9, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 36 Views
Muqdisho – Borussia Dortmund weerar-yahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo warramayaa inuu rajeynayo ka tagista kooxda Jarmalka, ka hor inta uusan u dhaqaaqin horyaalka China Super League. Sina Sports, ayaa sheegtay in xiddiga reer Gaboon uu ku sii jeedo dalka ...
radio himilo January 9, 2018	Features Leave a comment 80 Views
Muqdisho – Badi dadka waxa caado u ah cabitaanka qabaw xilligga cunnada ama kaddib, balse waxa la warinayaa iminka in uu waxyeeleyn karo dheef-shiidka. Khabiir dhanka cunnada ah “Irina Khristianovic” ayaa daah rogay in joogteynta cabitaanada qabaw waqtiga cuntada ama ...
Waxa la geliyay sanduuqii maydka, balse waxa la ogaaday inuu noolyahay!
radio himilo January 9, 2018	Features Leave a comment 72 Views
Muqdisho – Sida laga soo xiganayo warbaahinta dalka Spain waxa dib neeftiisa u helay maxbuus saddex dhaqtar isaga marqaati kaceen geeridiisa oo lagu riday sanduuqa maydka. Gonzalo Montoya Jimenez, oo ahaa maxbuus ku jiray xabsiga degmada Asturias, ayaa soo laabtay ...
radio himilo January 8, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 33 Views
Muqdisho – Kooxaha Arsenal iyo Manchester City ayaa lasoo warinayaa in ay diiwaan galiyeen xiisaha ay u qabaan difaaca naadiga West Bromwich Albion ee Jonny Evans. Intii lagu guda jiray xagaagii dhamaaday, labada kooxood ayaa ku fashilmay in ay lasoo ...
War-bixin: Lionel Messi oo saftay kulankiisii 400-aad ee La Liga.
radio himilo January 8, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 32 Views
Muqdisho – Lionel Messi ayaa Barcelona ku hogaamiyey guul 3-0 ah oo ay ka gaaraan naadiga Levante ciyaar ka dhacday Camp Nou, wuxuu ahaa kulankiisii 400aad ee horyaalka La Liga. Waqtigaas laacibka reer Argentine ayaa dhaliyey 365 gool, 211ayuu ku ...
Leicester City oo ku dhow in ay lasoo wareegto Fousseni Diabate oo u ciyaara Gazelec Ajaccio
radio himilo January 8, 2018	Xulka cayaaraha Leave a comment 29 Views
Muqdisho – Leicester City ayay wararku sheegayaan iney u dhaqaaqeyso saxiixa Fousseni Diabate, oo ka imaanaya kooxda Gazelec Ajaccio. Todobaadkii lasoo dhaafay, ayaa la werinayey in wadada hadalada labada kooxood uu mira dhal ku dhowyahay isla markaana uu lacibkan kusoo ...
Nin isku dal-dalay bidaar naceyb.
radio himilo January 8, 2018	Features Leave a comment 75 Views
Muqdisho – Jaceyl uu uqabay muuqaalkiisa oo mar walba qurxoonaada darteed ayaa ku qasabtay inuu noloshiisa aduunyo soo geba-gabeeyo Injineer u dhashay dalka Hindiya. In muddo ah waxa ka hoobanayay timaha, waxa uuna wallaac joogta ah ka qabay maalin uun ...
Morocco: Lamaane isku guursaday guri lagu xanaaneeyo waayeelada.
radio himilo January 8, 2018	Features Leave a comment 56 Views
Muqdisho – Warbaahinta Dalka Morocco ayaa daabacday Qisada Regragui iyo Mysore oo ah lamaane iska calmaday goob lagu xanaaneeyo waayeelada, Sheekada xiisaha u yeeshay guurkaan ayaa lagu sheegay in Mysore iyada jeceylka iyo guurkaba usoo bandhigatay Regragui. Bilawga sheekadaan waxa ...
radio himilo December 30, 2017	Features, Wararka Leave a comment 97 Views
Muqdisho – Zanco tiny t1 hadda waxaa rasmi loogu aqoonsaday moobilka ugu yar ee abid lasoo saaro. Waxaa lagu keydsan karaa numbaro dhan 300 oo qof. Sida moobillada caadiga ayaad u adeegsan kartaa: farriimaha gaagaaban ayaad ku qori kartaa: kana ...